Yintoni eyona nto ithengiswayo eAr Hudson County Sheriff Auction? - I-NJ kunye ne-NY yeNdawo yeZindlu kunye nokuThengiswa, ukuKhuselwa kwaBantu abaKhuselayo kunye namaGqwetha okubhunga
ikhaya / Blog / Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew York / Yintoni eyona nto ithengiswayo eAr Hudson County Sheriff Auction?
Julayi 25, 2016 Ukhuselo lweNtshabalalo eNtsha laseNew YorkUshiye uluvoAndres Cardenas
Kule veki iphelileyo ndinomntu obuze ukuba yeyiphi intengiso kwintengiso yeArdson County Sheriff. Babona uluhlu kule Hudson County Sheriff iwebhusayithi, kodwa babe nokuqonda ukwaphuka kwento eyayithengisiwe. Idatha kwisiza khange ibonakale ukuba iyahambelana nentengiso ukusuka kuJulayi 21st, 2016. (Jonga iposti yethu yangaphambili.)
Okwangoku zingaphezulu kwe-700 iipropathi ezidwelisiweyo, kodwa zizakhiwo ze118 kuphela ezinomhla ocwangcisiweyo wokuthengisa. Iipropathi ze-45 kuphela ezimiselwe ukuthengiswa kwi-Agasti 4th. Uninzi lwepropathi zidweliswe njengomhla wokuthengisa. Jonga idatha engezantsi kunye nemephu esekwe Hudson County Sheriff iwebhusayithi. Ukuchaneka akuqinisekiswanga njengoko iipropathi zihlala zihlaziywa kwaye neentsuku zokutshintshwa kwezilungiso ziyaguquka. Ngokusisiseko, kufuneka wenze uphando lwakho lwe-lien, okanye uqeshe igqwetha-kwaye ungaxhomekeki kule datha kuphela ukuba ufuna ukwazi ukuba yeyiphi na ipropathi eza kuthengiswa endle kunye nokuba
Qhagamshela idatha ye-Agasti 4, i2016 Hudson County Sheriff yokuthengisa
Khuphela ifayile ye-Excel yedatha
Ukuhlelwa kwedatha kwiwebhusayithi yokuthengisa ye-Hudson County Sheriff kwiipropathi ze-60 zizonke zidwelisiwe njengoko zithengisiwe okanye zirhoxisiwe ngoJulayi 21, 2016. Njengayo nayiphi na into oyithengisayo, abathengi kunye nabachazi-mthetho badla ngokudibana ukuze bafumane izisombululo zokuba kungabikho ntengiso yamakhaya abantu. Ukulungiswa kwemboleko-mali, ukuthengiswa okufutshane, imali ezinkozo, kunye nokuchithwa kwemali kungazitshitshiswa zonke iindlela zokurhweba kwabathengi. Nxibelelana nathi ukuba ukhona omaziyo ofuna uncedo [Imeyile ikhuselwe] Okanye ubize (844) 533-3367.
Ngaba imanyano iyindlela elungileyo yolawulo lwabantu aboriginal?